သံလိုက်မြှောင် Card ကို, သံလိုက် Card ကို, PVC Material Magneticcard, RFID Magnetic Card, Plastic Magnetic Card
သံလိုက်မြှောင် Card ကို
သည်အခြားအမျိုးအစားကဒ် သံလိုက် Card ကို, သံလိုက်မြှောင် Card ကို, Plastic Magnetic Card, PVC Material Magneticcard, RFID Magnetic Card
SeabreezeRFID, LTD. Magnetic Stripe Card Writing Data Free.
ဘုံသံလိုက်ချွတ် (Loco): 300 oe
အမြင့်သံလိုက်ချွတ် (HiCo): 2750 oe သို့မဟုတ် 4000 oe
သံလိုက်ချွတ်အရောင်: အနက်ရောင်, ညိုသော, အနီေရာင်, စိမ်းလန်းသော, စသည်တို့ကိုရွေးချယ်နိုင်
သံလိုက်ချွတ်အကျယ်: စံ 12.5mm သို့မဟုတ် 8 မီလီမီတာ
ဝန်ဆောင်မှုဘဝ: > 2000 ကြိမ်
အပူအအေး: 130± 10 ℃(26650 ±℉)
Cardbody ပစ္စည်း: PVC / PET / PETG / ကို ABS, 0.13မီလီမီတာကြေးနီဝါယာကြိုး
High coercivity magnetic cards（HiCo): (2700 oe) (eg: Metro cards, ဖုန်းကိုကတ်များ )
High resistance to magnetic strip: high resistance to magnetic strip, magnetic anti typically 2750(oe), 3500(oe) နှင့် 4000(oe)
Each strip card data has been written at the factory, there are three tracks on the magnetic strip. လမ်း 1 and Track2is read-only track when using the information recorded on the track only allowed to write or read and modify. လမ်း3isatrack write, read, in use, can also be written.
လမ်း 1 can record numbers (0-9 ), အက္ခရာများ (A-Z ကို), and other symbols such as brackets, separators, စသည်တို့ကို, the maximum recorded 79 numbers or letters. လမ်း2နှင့်3characters recorded only numbers (0-9 ). လမ်း2recorded maximum 40 ဇာတ်ကောင်3tracks recorded 107 characters maximum.
တစ်ဦးက, card confidentiality and security is poor.
B က, using the magnetic strip card application systems need to support reliable computer system and the central database.
Magnetic strip cards can also be encapsulation chips made into RFID card. Also in the card surface hot laser gold or laser silver, barcode printing, hit convex code, စသည်တို့ကို.
prev: RFID ဘားကုဒ်ကဒ်, QR Code ကိုကတ်, ခရမ်းလွန်ပရင့်ထုတ်ရန်ဘားကုဒ်ပလတ်စတစ်ကဒ်
နောက်တစ်ခု: ပလပ်စတစ်ပရိုဖိုင်းကိုကတ်, ပုံမှန်မဟုတ်သော Shape PVC Card ကို